Shir Ay Yeesheen Gudiga Fulinta Jaaliyada UK oo Ka Dhacay Gudaha Safaarada DFI ee Uk iyo Gudoomiyihii Jaaliyada UK oo La Bedelay - Cakaara News
Shir Ay Yeesheen Gudiga Fulinta Jaaliyada UK oo Ka Dhacay Gudaha Safaarada DFI ee Uk iyo Gudoomiyihii Jaaliyada UK oo La Bedelay
LONDON (CakaaraNews) Talaado March 12,2013:- Waxaa shalay saacadu markay ahayd 5tii Galabnimo ilaa 11:30 Habeenimo shir socday isugu yimid Gudiga Fulinta Jaaliyada DDSI ee Dalka UK,kuwaasoo ka koobnaa 22 xabnood,iyadoona uu shirkani ka dhacay gudaha safaarada DFI ay ku leedahay Boqortooyada Ingiriiska islamarkaana ay goob-oog ka ahaayeen Safiirka DFI u fadhiya UK Dr Burhanu Kabade iyo xubno ka mid ah odayaasha iyo aasasayaasaha jaaliyada.
Shirkan ayaa amaan iyo dhaliilba loogu soo jeediyey hawl-wadeenadii hore u hayay Hogaanka Maamulka Jaaliyada. Waxaa lagu amaanay waxqabadkoodii mudada halka sano ahayd, balse waxaa lagu dhaliilay in ayna wada-shaqayn lahayn islamarkaana ayna qaban kulamo caadi ah oo loogu talagalay in xubnaha jaaliyadu ku doodaan,taasoo gabi ahaanba ka dhigaysa in uu Hogaanku kari waayay Gudi ku shaqaynta Xubnaha(Team-Work) iyo Iskuxidhka.
Gudoomiyihii hore, Jamaal Sh Ibraahim, ayaa soo jeediyey qudbad dheer oo ku saabsan waxqabadkiisi isaga oo dhaliilay xubnihii lala doortay. Xubnaha kala ayaa gudoomiyaha ku dhaliilay in uu go'aamada muhiimka ah kalagii iska qaato,la tashi la'aan iyo Maamulkii jaaliyada oo Tunka lagu wato waa siday yidhaahdeene.
Kadib markii boodhku ama gudiga fulintu dhagaystay labada dhinac waxa la soo jeediyey in loo codeeyo in gudiga hadda jooga la saxo oo loo daayo xilka iyo in gudi cusub la doorto. Xubnaha boodhka ayaa badankoodu isku raaceen in gudi cusub la doorto madaama xilkii guduid hore dhamaaday islamrkaana ayna wada shaqayn lahayn. Boodhaka ayaa u codeeye xubnaha soo socda:
1-Dr Nuur Xuseen -----------------gudoomiye
2-Mustafe Wacays ----------------gudoomiye ku xigeen
3-Maxamada Faarax ----------------xoghaye
4-Amiin Adan ------------------------- qasanaji
5- C/qadir Ismaaciil --------------- xidhiidh dadweynha iyo warbaahinta.
Xubnaha cusub ayaa ka soo kala jeeda gobolada Qoraxay, Sitti, Afdheer, Liibaan iyo Doolo. Boodhka ayaa go'aamiyey in gudida cusub la horkeeno golaha dhaxee ee jaaliyada oo shirweyne loo qaban doono xilii aan wali la go'aamin.
Waxaa kale oo gudidii hore laga codsaday in ay la shaqeeyaan gudida cusub islamrkaana ku wareejiyaan hantida iyo dhukumanatiga jaaliyada. Doorashada shalay ayaa soo afjari doonta tuhun badan oo ay qaban xubnaha jaaliyada qaar ka mid ah oo rumaysna in ay wax khaldan yihiin islamrkaana loo baahan yahay in la saxo.
Jaaliyada DDSI Ingiriiska ayaa ka mid ah kuwa ugu da' weyn islamarkaana ugu firfircoon Dalalka Yurub. < Prev